Akụkọ - Nnwale ihe eji achọ polishing
Diamond na-egweri akpụkpọ ụkwụ
Mpempe akwụkwọ diamond trapezoid
Egwuregwu HTC diamond
Ngwongwo diamond Lavina
Ngwongwo okpokoro Husqvarna
Mpekere diamond scanmaskin
Diamond cup wiil
Ihe nkedo Polish
Diamond PCD maka iwepu ihe mkpuchi
Concrete polishing ule ndụ show
Taa, anyị nwere ihe polishing ule ndụ show, anyị tumadi tụnyere nchapụta nke 3 ″ iri na abụọ ngalaba polishing na mpe mpe akwa na 3 ″ torx polishing na mpe mpe akwa.
Nke a bụ 3 ″ iri na abụọ ngalaba polishing na mpe mpe akwa, na ọkpụrụkpụ bụ 12mm, ọ kwesịrị ekwesị maka akọrọ polishing ihe na terrazzo n'ala. Grit 50 # ~ 3000 # dị. Ọ ga-abụ ihe ike, inogide, kenkowaputa karịa ọtụtụ ndịresin polishing pad n'ahịa.
Nke a bụ mpempe akwụkwọ ọzọ anyị na-akpọ 3 inch torx polishing pad, nke ewepụtara n'afọ gara aga. Ọ na-eji maka akọrọ polishing ihe na terrazzo n'ala, ma ọkpụrụkpụ bụ naanị 10mm. Ejiri usoro kachasị ọhụrụ mee ya. ọnụahịa dị ezigbo mma. Ọ dị elu karịa ọnụ ala karịa nke a.
50 # -100 # -200 # ya na-eme ihe ike ma na-adịgide adịgide karịa ọdịnala resin pad, ị ọbụna nwere ike na-emeso ya dị ka ngwakọ ngwakọ, nke nwere ike iwepụ ngwa ngwa nke ọkọlọtọ hapụrụ site na diamond diamond 120 #, ọbụlagodi 80 #.
400 # -800 # -1500 # -3000 # na-egbu maramara polishing na mpe mpe akwa, nke nwere ike ime ka ijuanya dị elu na nghọta dị elu na ala gị.
Nke a bụ ngalaba nnwale, ọ bụ ụlọ na-egwe ọka. Ọ na-egweri site na metal ngwaọrụ grit 30-60-120 #, resin pad 50 # -100 #. Iji nweta ezigbo ule nnwale, anyị enwetela hardener n'elu iji mee ka isi ike nke ala sie ike. Ugbu a, e kewaa ala ụzọ abụọ. Left Nkebi A na aka nri bụ Nkebi B. Anyị ga-anwale 3 nke anụ ọhịa ahụ na mpempe akwụkwọ iri na abụọ na ngalaba A, a ga-anwale pad na-acha ọkụ ọkụ nke anụ ọhịa 3 nke ngalaba B.
Mgbe polishing site 200 # -400 # -800 #, ị pụrụ ịhụ kpọmkwem site n'elu na ngalaba B nwere nnọọ elu sheen, na ị pụrụ ịhụ ezi ìhè reflectivity. N'ebe dị mita 30 ruo 50, ala na-egosipụta n'ụzọ doro anya akụkụ na ọkụ ọkụ.